ईसा पूर्व नवौं शताब्दीदेखि पाँचौ शताब्दीसम्मको अवधिलाई चीनको इतिहासमा युद्ध राज्यकाल भनिन्थ्यो। त्यसै बेला रजौटाहरुको अधिनमा परेका स-साना राज्यहरुको संख्या कैयन दर्जन पुगिसकेको थियो। यस्तो स्थितिमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नका लागि विभिन्न साना राज्यहरुले देशभित्र र बाहिर पनि सकारात्मक र प्रभावकारी नीति अपनाउनु एक निकै महत्वपूर्ण कुरा थियो। त्यसैकारण सम्राटहरुका लागि नीति निर्धारण गर्ने केही सहयोगी व्यक्तिहरु देखापरेका थिए। मुलुकको राज्य व्यवस्था सञ्चालनको क्षेत्रमा ती व्यक्तिहरुले आ-आफ्नो दार्शनिक विचार र उपायले सहयोग गरेका थिए। अझ विशेष गरी गहन अर्थपूर्ण र जीउँदोजाग्दो उपमाको प्रयोग गरेर शासकहरुलाई सम्झाउँदा पनि ती शासकहरुलाई रिस नउठेको मात्र नभई उनीहरुले ती सअयोगीहरुको कुरा सुन्ने र मान्ने गरेका थिए।
"एकाएकको चिच्याहटद्बारा मानिसलाई स्तब्ध" भन्ने कथा यु ठुन् खुन् नामका एकजना प्राज्ञाशील व्यक्तिले सम्राटलाई सम्झाउदाको कथा हो।
छि वै वांग भनेको छि राज्यका भर्खरै राज्यारोहण गरेका सम्राट थिए। राजकुमार हुँदै उनी एकजना निकै बुद्धिमान किशोर थिए। उनले धेरै मेहनत गरेर साँस्कृतिक र सैनिक ज्ञान आर्जन गर्नुका साथै देशको राज्य व्यवस्था सञ्चालनको नीति र उपायमा पनि धेरै ध्यान दिएका थिए। राज-सिंहासनमा बसेपछि मुलुकलाई एक ठूलो राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्ने उनको आशा थियो। तर राज्यारोहणपछि छि राज्यका सम्राटले राजकुमारभन्दा सम्राटले ज्यादै भन्दा ज्यादै भोगविलास गर्न सक्ने थाहा पाएका थिए । उनले हरेक दिन भाइ-भारादारहरुको सुझाउमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेका थिए। र कामबाट घर फर्केपछि मिठा-मीठा खाने कुरा र सुन्दरीहरुको सेवामा रमाउने गरेका थिए। यसरी विस्तारै-विस्तारै राजकुमार छँदा आफूले गरेको संकल्प उनले बिर्सँदैगएका थिए।
दुइ वर्ष बित्यो। छि वै वान मदिरा र सुन्दरीहरुको भोग-विलासमा मात्र मग्न हुनथाले। हरेक दिन उनी रक्सी खाने र शिकार खेल्न जाने गरेका कारण राज्य व्यवस्था सञ्चालनको कार्य भाइ-भारादारहरुका हातमा सुम्पिदिएका थिए। त्यसैले राज्यको राजनीतिक काम-कुराहरुमा सही निर्देशन हुन नसकेका कारण अधिकारीहरुले लापरबाही भएर काम गर्ने, घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दैगयो र राज्य झन-झन दुर्बल हुँदैगयो। यस मौका छोपेर छिमेकी राज्यहरुले त्यसमाथि आक्रमण गर्ने कुचेष्टा गरे। सोझा अधिकारी र साधारण जनता निकै चिन्तित भए तापनि आफैमाथि दोष थोपरिने डरका कारण सम्राट छि वै वाङलाई सम्झाएका थिएनन, उनिहरुले।
एक दिनको कुरो थियो। ठोन् यु खुन र सम्राट छि वै वाङ बीच भेट भयो। ठोन् यु खुनले सम्राटलाई देख्ने बित्तिकै भने"महासम्राट, म एउटा गाउँ खाने कथा भन्छु, हजूर जवाफ दिनुहोस।" छि वै वाङले सोधेः "कस्तो गाउँ खाने कथा हो?"
ठोन् यु खुनले भनेः "एउटा मुलुकमा एउटा ठूलो चरो छ। त्यस चराले सम्राटको दरबारमा बास बस्नलागेको तीन व‌र्ष भयो। तर त्यो चरो उड्न पनि उड्दैन, कराउन पनि कराउँदैन। यो चरा कुनै काम नगरीकन त्यसै डल्लिएर बसिरहेको छ। हजूरको विचारमा यो चराको नाम के हो?"
एकछिन विचार गरेर छि वै वाङले ठो यु खुनलाई भनेः"यो ठूलो चरो उड्दैन तर उड्ने बित्तिकै धेरै माथि आकाशमा पुग्नेछ, चिच्याउँदैन तर एकाएक चिच्च्याएमा चिच्याउने बित्तिकै सबै मानिसहरुलाई स्तब्ध पार्नेछ। पख, हेर्दैगर, यो साँच्चै हो।"
यसरी"एकाएकको चिच्याहटबाट मानिसलाई स्तब्ध"भन्ने उखानको उत्पत्ति यो कथाबाट भएको छ। यसको अर्थ होः अलौकिक क्षमता भएको एकजना व्यक्तिले आफ्नो दक्षताको राम्रोसँग प्रयोग गरेको खण्डमा मानिसलाई स्तब्ध पार्नेखालको श्रेयदान गर्नसक्ने निकै सम्भावना हुन्छ भन्ने हो।